themes | MyanmaPress Blogging Platform
WordPress Custom Menu အား အ​သံုး​ြပု​ြခင်း​Leaveareply WordPress 3.0 ရဲ့ အ​ရင်​က Menu တစ်​ခု​ထည့်​မယ်​ဆို​ရင် Categories ေတွ Tag ေတွ​ကို အ​သံုး​ြပု​ြပီး Theme ထဲ​မှာ သူ​တို့​ရဲ့ Function ေတွ​သံုး​ြပီး သွား​ြပင်​ရ​ပါ​တယ်။ ကိုယ်​ထား​ချင်​တဲ့ တစ်​ခု​ကို ေရှ့​ေနာက် စဉ်​ေပး​ရ​တာ ေတာ်​ေတာ်​ေလး ခက်​ခဲ​ြပီး အ​ချိန်​ကုန်​ပါ​တယ်။ အ​ြပင်​က​လင့်​ခ်​တစ်​ခု​ကို Menu မှာ ြပန်​ညွှန်း​ချင်​တယ်​ဆို​ရင်​လည်း Manual ထည့်​ရ​ပါ​တယ်။
WordPress 3.0 နဲ့ သူ့​ရဲ့​ေနာက်​ပိုင်း​မှာ​ေတာ့ Appearance ေအာက်​မှာ Menu အ​တွက် ထပ်​ထည့်​ေပး​လာ​ပါ​တယ်။ WordPress Theme ေရး​တဲ့​သူ​ေတွ​က​လည်း ၎င်း Function ကို ထည့်​ေရး​လာ​ြက​ပါ​တယ်။ ယ​ခု​ေြပာ​ြပ​မှာ​က​ေတာ့ အဲ​ဒီ Function အ​သံုး​ြပု​ထား​တဲ့ Theme ေတွ​မှာ Menu ကို ဘယ်​လို​ထည့်​ရ​မ​လဲ​ဆို​တာ​ကို​ပါ။ ကျွန်​ေတာ့် Theme နဲ့ ဥ​ပ​မာ ေပး​ပါ့​မယ်။
ပ​ထ​မ​အ​ဆင့် အ​ေန​နဲ့ Adminpanel » Appearance » Menus ကို​သွား​ပါ။ Menu တစ်​ခု တည်​ေဆာက်​ပါ​မယ်။ ညာ​ဖက်​က Menu Name ဆို​တာ​ရဲ့ ေဘး​အ​ကွက်​မှာ ြကိုက်​နှစ်​သက်​ရာ အ​မည်​တစ်​ခု​ေရး​ြပီး Create Menu ကို​နှိပ်​ပါ။ ကျွန်​ေတာ်​က​ေတာ့ Main Menu လို့​ေပး​လိုက်​ပါ​တယ်။ ြကိုက်​တဲ့​နာ​မည် ေပး​လို့​ရ​ပါ​တယ်။ Menu နှစ်​ခု သံုး​ခု​ေလာက်​သံုး​ထား​တဲ့ Theme မှာ​ဆို မှတ်​မိ​လွယ်​ေအာင် Menu ေတွ မ​ေရာ​ေအာင် ေပး​သင့်​ပါ​တယ်။
The Main Menu menu has been successfully created. လို့​ေပါ်​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ်။ ဒါ​ဆို​ရင် သင့်​ရဲ့ Pages ေတွ Categories ေတွ​အ​ြပင် Custom Link ေတွ​ပါ​ထည့်​နိုင်​ဖို့ ဘယ်​ဖက်​ေဘး​မှာ သူ့​ကဏ္ဍ​အ​လိုက် အ​ကွက်​ေလး​ေတွ လင်း​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ်။ (Categories ေတွ​က​ေတာ့ ကွျန်​ေတာ်​တို့ ပို့​စ်​ေတွ ေရး​က​တည်း​က ေပး​ထား​ြပီး​သား ြဖစ်​ရ​မယ်​ေနာ်၊ ကွျန်​ေတာ်​က​ေတာ့ ေဆာင်း​ပါး​ဆို ေဆာင်း​ပါး၊ ကိုယ်​ေရး​ကိုယ်​တာ​ဆို ကုိယ်​ေရး​ကိုယ်​တာ စ​သည်​ြဖင့် ေပး​ထား​တာ​ေပါ့။
ဒါ​ဆို​ရင် ခု​န​က ကျွန်​ေတာ့်​တို့ ေဆာက်​ခဲ့​တဲ့ Main Menu ဆို​တာ​ေအာက်​မှာ ထည့်​ချင်​တဲ့ Categories ေတွ Pages ေတွ​ကို ထည့်​ြကည့်​ရ​ေအာင်။ အ​ရင်​ဆံုး Categories ေအာက်​က ထည့်​ချင်​တဲ့ Menu ေလး​ခု​ေလာက်​ကို အ​မှန်​ြခစ်​က​ေလး​ေတွ ေပး​လိုက်​တယ်။ ြပီး​ေတာ့ Add to Menu ကို​နှိပ်​လိုက်​ရင် Main Menu ေအာက်​ကို ေရာက်​သွား​ပါ​လိမ့်​မယ်။
အ​ထက်​ေအာက် ေြပာင်း​ချင်​ရင်​ေတာ့ ဖိ​ထား​ြပီး Drag and Drop လုပ်​လို့​ရ​ပါ​တယ်။ Item တစ်​ခု​ေအာက်​မှာ ကဏ္ဍ​ထပ်​ခွဲ​ထည့်​ချင်​တယ်​ဆို​ရင်​လည်း အ​ေပါ်​က Item ေအာက်​ကို တ​ရွတ်​ဆွဲ​ြပီး​ထည့်​လိုက်​ရံု​ပါ​ပဲ။ အ​ခု​ကျွန်​ေတာ်​က ေဆာင်း​ပါး​ရဲ့​ေအာက်​မှာ Personal ကို​ထည့်​ြပ​ထား​ပါ​တယ်။
ကဏ္ဍ​အ​မည်​ေတွ ေြပာင်း​လို့​ရ​ပါ​တယ်။ ဥ​ပ​မာ Article ကို ေဆာင်း​ပါး လို့ ေြပာင်း​လိုက်​တာ​မျိုး​ေပါ့။ ေြပာင်း​ချင်​တဲ့ Menu Item ရဲ့ ညာ​ဖက်​ေထာင့်​က ေအာက်​ကို​စိုက်​ေန​တဲ့ ြမား​ေလး​ကို​နှိပ်​ြပီး​ြပင်​ပါ။ ဖျက်​ပစ်​ချင်​ရင်​ေတာ့ Remove ကို​နှိပ်​ပါ။
ဒါ​ဆို​ရင် Menu တစ်​ခု တည်​ေဆာက်​ြပီး​ပါ​ြပီ။ သို့​ေသာ် ၎င်း Menu ကို ဘယ်​မှာ​ထည့်​မယ်​ဆို​တာ မ​သတ်​မှတ်​ရ​ေသး​ပါ​ဘူး။ ဘယ်​ဖက်​အ​ကွက်​ေလး​ေတွ​ထဲ​က Theme Location ကို​ြကည့်​ပါ။ အဲ​ဒါ​က​ေတာ့ မိ​မိ​အ​သံုး​ြပု​ထား​တဲ့ Theme က Menu ဘယ်​နှစ်​ခု Support လုပ်​သ​လဲ​ဆို​တာ​အ​ေပါ် မူ​တည်​ြပီး Your theme supports2menus. စ​သည်​ြဖင့် ေပါ်​လာ​ပါ​တယ်။ ကျွန်​ေတာ့ Theme က Menu နှစ်​ခု ပါ​ပါ​တယ်။ Top Menu နဲ့​Primary Menu ဆို​ြပီး​ေတာ့​ပါ။ အ​ခု​န​က တည်​ေဆာက်​လိုက်​တဲ့ Menu ကို Primary အ​ေန​နဲ့ အ​သံုး​ြပု​ချင်​တဲ့​အ​တွက် Primary Menu ေဘး​က ြမား​ေလး​ကို​နှိပ်​လိုက်​ပါ။ ဒါ​ဆို​ရင် Main Menu လို့​ေပး​ခဲ့​တဲ့ နာ​မည်​ကို ေတွ့​ပါ​လိမ့်​မယ်။ ေရွး​ြပီး​ေတာ့ Save ကို​နှိပ်​လိုက်​ပါ။ ြပီး​လျှင် Save Menu ကို​နှိပ်​ပါ။
ဒါ​ဆို​ရင် ဆိုဒ်​မှာ Menu က​ေပါ်​လာ​ပါ​ြပီ။
အ​ေပါ် Menu အ​တွက် ေနာက်​ထပ်​တစ်​ခု ထပ်​ြပီး တည်​ေဆာက်​ပါ​မယ်။ Adminpanel » Appearance » Menus မှာ​ပဲ Menu အ​သစ်​တစ်​ခု ထပ်​တည်​ေဆာက်​ပါ​မယ်။ အ​ခု​န​က လုပ်​ထား​တဲ့ Main Menu ေဘး​မှာ အ​ေပါင်း​ပံု​ေလး​ကို နှိပ်​လိုက်​ပါ။ အ​မည်​ကို​ေတာ့ For Top Menu လို့​ေပး​လိုက်​ြပီး Create Menu ကို​နှိပ်​ပါ​တယ်။
ဒီ Menu မှာ​ေတာ့ ကျွန်​ေတာ်​က Page တစ်​ခု​ထည့်​ြပီး Home ဆို​တာ​ေလး​ကို​ပါ Custom Links က​ေန ထည့်​ပါ​မယ်။ Custom Links မှာ Url ေန​ရာ​မှာ​က မိ​မိ​ထည့်​လို​တဲ့ Link ကို​ထည့်​ပါ။ Label မှာ​က​ေတာ့ ၎င်း Link အ​တွက် နာ​မည်​ေပး​လိုက်​ပါ။ Add to Menu ကို​နှိပ်​ပါ။ Pages မှာ​ေတာ့ About Me ကို​ေရွး​လိုက်​ပါ​တယ်။
ြပီး​လျှင် Add to Menu ကို​နှိပ်​ပါ။ ဒါ​ဆို​ရင် For Top Menu ေအာက်​မှာ Menu Item ၂ ခု​ေရာက်​သွား​ပါ​လိမ့်​မယ်။ ဒီ​တစ်​ခါ​ေတာ့ အဲ​ဒီ Top Menu အ​တွက် လုပ်​ထား​တာ​ကို Top Menu မှာ ထည့်​ပါ​မယ်။ Theme Location က Top Menu မှာ For Top Menu ဆို​တာ​ကို ေရွး​လိုက်​ရံု​ပါ​ပဲ။ ြပီး​ရင်​ေတာ့ Save Menu ကို​နှိပ်​လိုက်​ေပ​ေတာ့​ဗျာ။
ကဲ Menu ေလး​ေတွ​ထည့်​ြကည့်​မယ်​ဆို​ရင် မှတ်​ထား​ရ​မှာ​က Categories ေတွ​က သက်​ဆိုင်​ရာ ကဏ္ဍ​အ​လိုက် ေပး​ြပီး​သား ြဖစ်​ရ​ပါ​မယ်။ Pages ေတွ​လည်း ထည့်​ြပီး​သား ြဖစ်​ရ​ပါ​မယ်။ Custom Link က​ေတာ့ မိ​မိ​ြကိုက်​နှစ်​သက်​ရာ​ကို ထည့်​နိုင်​ပါ​တယ်။ အ​ချို့ Theme များ​က​ေတာ့ Home button အ​တွက် ထည့်​ေပး​ြပီး​သား ြဖစ်​ပါ​လိမ့်​မယ်။ မ​ပါ​ဘူး​ဆို​ရင်​ေတာ့ Custom Link က​ေန ထည့်​ရံု​ေပါ့။ Theme Location မှာ Menu ဘယ်​နှစ်​ခု​ကို အ​ေထာက်​အ​ပံ့​ေပး​လဲ​ဆို​တာ ပါ​ပါ​လိမ့်​မယ်။ တ​ချို့ Theme ေတွ​ဆို​ရင် အ​ေပါ်​မှာ ၂ ခု​အ​ြပင် Footer မှာ တစ်​ခု​ပါ​လာ​တာ​မျိုး ရှိ​ပါ​တယ်။ Magazine လုပ်​မယ့် သူ​ေတွ​အ​တွက်​က​ေတာ့ အ​ကိုက်​ပါ​ပဲ။
WordPress Version 3.0 နှင့်​အ​ထက် ြဖစ်​ေသာ်​လည်း Custom Menu အ​ေထာက်​အ​ပံ့​မ​ေပး​ေသာ Theme များ​အ​တွက် ဘယ်​လို​ထည့်​ရ​မ​လဲ​ဆို​တာ ေနာက်​ထပ် Tutorial တစ်​ခု ထပ်​ေရး​ေပး​ပါ့​မယ်။
WordPress ြဖင့် ေပျာ်​ေမွ့​နိုင်​ြက​ပါ​ေစ
နွယ်​ရိုး​၁​၂/​၃/​၂​၀​၁​၃ ၁​၂း​၄​၀ ေအ​အမ်
This entry was posted in Menu, themes and tagged Menu on March 12, 2013 by Nwe Yoe. Theme ဘာ​သာ​ြပန်
This entry was posted in themes, wordpress, ဘာ​သာ​ြပန်​ကိ​စ္စ​များ​and tagged internationalization, localization, Theme, translation, wordpress, ဘာ​သာ​ြပန်, ြမန်​မာ​လို on November 21, 2010 by mmpressadmin. Themes များ ြကို​တင်​ြကည့်​ရှု​ရန်
Leaveareply ေအာက်​ေဖာ်​ြပ​ပါ စာ​ရင်း​တွင် ပါ​၀င်​သည့် Theme များ​ကို ေရး​သား​ခဲ့​ြက​သူ​များ အား​လံုး​ကို အ​ထူး ေကျး​ဇူး​တင်​ရှိ​အပ်​ပါ​သည်။
This entry was posted in themes on October 8, 2010 by mmpressadmin. Search for: